Tom Howard - သင်၏ဆေးခြောက်ရှေ့နေနှင့်သင်၏မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ကိုအချိန်ဇယားဆွဲပါ
သင်၏ဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီသည်ရှေ့နေကောင်းတစ် ဦး လိုအပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း
ရှုပ်ထွေးသောရှုထောင့်ကိုပေးသောသင်၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုဒုတိယအကြိမ်မျက်စိဖြင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ပိုမိုအောင်မြင်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ Warren Buffett သည်ရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် 1959 ခုနှစ်တွင်ချာလီ Munger သူ၏ထင်မြင်ချက်များကိုအလွန်နှစ်သက်သဖြင့်သူသည်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစွန့်ခွာပြီး Berkshire Hathaway တွင်သူနှင့်အတူပါဝင်ရန်သူ့ကိုစည်းရုံးခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်နေသည့်ဆေးခြောက်ရှေ့နေများသည် ၄ ​​င်း၏စွန့်စားမှုများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုနက်နက်နဲနဲသိရှိထားခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်ကိုရရှိစေပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့ပါးစေသည်။
သင်၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်းဖြင့်ပေးသောအရေးကြီးသောအကျိုးခံစားခွင့် ၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါမည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ရှေ့နေငှားရမ်းပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအရာအမျိုးမျိုးနှင့်ကူညီကြသည်။ ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေသည်သင်၏အဖွဲ့သို့ယူဆောင်လာနိုင်သောလက်တွေ့ကျသောအကျိုးကျေးဇူးငါးခုကိုဖော်ပြပါ။
a ။ တိုင်ပင်ပါ ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်လျှော်ရှေ့နေ သင့်ရဲ့ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို။
ဆေးခြောက်သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အသုံးပြုမှုနှင့်လူကြိုက်များမှုတို့တွင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည်။ အစပိုင်းတွင်မညီမညာဖြစ်နေသောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ယခုအခါအမေရိကန်ပြည်နယ်များစွာ၌ဝါရှင်တန်ဒီစီသည်ဆေးခြောက်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ လျှော်ပေးသည့်ပစ္စည်းများကိုအက်ဥပဒေမှဖယ်ရှားပြီးနောက်လျှော်သည်အပြည့်အဝတရားဝင်သည် 2018 လယ်ယာဘီလ်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ် ၃၃ ခုသည်ဆေးခြောက်ပုံစံကိုစစ်မှန်။ အလားအလာရှိသောဆေးဝါးဆိုင်ရာနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
သင်ဤကြီးထွားလာသောဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်စွန့် ဦး တီထွင်သူလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကဆေးခြောက်ကျွမ်းကျင်သူရှေ့နေငှားရမ်းရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤအချက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏စီးပွားရေးသည်သင်၏ပြည်နယ်ရှိသက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှော်ဆေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပန်းဖြေဆေးခြောက်များဖြစ်သောဆေးခြောက်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးခြောက်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားပါမည်။
ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဝင်ရန် 1. ရှုပ်ထွေးသောလိုအပ်ချက်များ & မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်
လိုင်စင်ရပြည်နယ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အမြတ်အစွန်းများရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ လျှောက်လွှာတင်သွင်းခများကိုမကြာခဏပေးရလေ့ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာ Connecticut ဖြစ်ပြီးဆေးခြောက်လုပ်ငန်းအတွက်လိုင်စင်တောင်းခံရန်လျှောက်ထားသူများကိုဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ မပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထားသည်။ ဤကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုစိတ်ထဲထည့်ပြီးဆေးခြောက်ရှေ့နေကသင့်အားအခကြေးငွေအလွန်အမင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုထေမိစေရန်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုမည်သို့ဖြည့်ဆည်းမည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အချို့သောဆေးခြောက်စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များသည်သူတို့၏ပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလိုက်နာရန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကြောင့်ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုတရားမ ၀ င်ဟုယူဆပြီးလိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ဆေးခြောက်ရှေ့နေတစ် ဦး ရှိခြင်းသည်သင်၏စတင်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အသုံးဝင်သည်။ သင် ၀ ယ်ယူလိုသောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းသည်မည်သည့်ကဏ္ijuအောက်တွင်ကျရောက်သည်ကိုအတွေ့အကြုံရှိရှေ့နေကသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ရည်မှန်းထားသောဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(ဈ) စိုက်ပျိုးခြင်း - ဆေးခြောက်အရည်အသွေးမြင့်မား။ စိတ်ချရသော၊ ထိရောက်သောထုတ်ကုန်ကိုအာမခံရန်အတွက်ပြည်နယ်အမျိုးမျိုးမှအထူးသဖြင့်ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဆေးခြောက်ပင်များကြီးထွားလာခြင်းသည်သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ခိုင်မာသည့်ကတိကဝတ်လိုအပ်သည်။ ဟော်ရီကာချာစုံလင်မှုရှိစေရန်သင်၏ရှေ့နေသည်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သင်စတင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
(ii) Infusion - လုပ်ငန်းရှင်များစွာသည် tinctures နှင့် cannabis infused edibles များကိုရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းများကိုလျှင်မြန်စွာတည်ထောင်နေကြသည်။ ဒီမယုံနိုင်စရာ bandwagon ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုအတွက်ဆေးခြောက်၏တန်ဖိုးရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတောင်းဆိုတိုးပွားလာသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ, တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ဤထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်လျော်သောအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ညွှန်ကြားချက်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ပြည်နယ်များအတွက်သိသိသာသာဥပဒေများရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
(၃) လက်လီ - လက်လီဆိုင်များအမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းခွဲများပါ ၀ င်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤစုဆောင်းသူများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတရားဝင်သက်တမ်း ၂၁ နှစ်အထက်လူကြီးများနှင့်လူနာများထံရောင်းချသည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုစတင်တပ်ဆင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်အကုန်အကျအများဆုံးဖြစ်သော်လည်းအခြားဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထက်အမြတ်အစွန်းများများရလေ့ရှိသည်။
ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ဥပဒေများနှင့်အမှန်တကယ်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်ရှေ့နေတစ် ဦး သည်သင့်လျော်သောအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေအနေများကိုပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ကူညီလိမ့်မည် သင့်ရဲ့ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ လျှောက်လွှာများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်း၊ သင်၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းနှင့်တရားဝင်ဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီကိုပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
စီးပွားရေးလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးရှာဖွေခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့သောဒေသများရှိလျှောက်လွှာကြေးကိုပြန်အမ်းမပေးသောကြောင့်လက်ခံရန်အာမခံချက်မရှိသဖြင့်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်ကျသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများကိုရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ခံစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ပြည်နယ်အတော်များများသည်သတ်မှတ်ထားသောinရိယာတစ်ခုတွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်သည့်ဥပဒေများရှိသည်။ ဤသည်စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ငှားရမ်းခနှင့်အသုံးအဆောင်များစသောကုန်ကျစရိတ်များကိုသင်ဖုံးကွယ်ရန်သင့်တွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုရှိ / မရှိကိုအခြားပြည်နယ်များကသင်၏ဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များကိုမေးမြန်းရန်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းသည်။
ဥပမာအီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်ပြည်နယ်တည်ထောင်ရန်နှင့်စီးပွားရေးဖွင့်ရန်အတွက်ဒေါ်လာခြောက်သန်းထက်မနည်းသောဘဏ္resourcesာရေးအရင်းအမြစ်များရှိရန်ပြည်နယ်သည်အဆိုပြုထားသောဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်လုပ်သောဆေးခြောက်သည်မတော်တဆဖြစ်စေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်စေစျေးကွက်ထဲသို့မရောက်ရှိနိုင်စေရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မှကျယ်ပြန့်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုကြည့်ရှုရန်ပြည်နယ်ကတောင်းဆိုနိုင်သည်။
ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများအပြင်ဒေသန္တရအစိုးရများနှင့်မြို့များသည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကို၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ အချို့သောဒေသန္တရအစိုးရများသည်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်။
ဤမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ သင်ထင်ထင်ရှားရှားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသွားလာရန်ကူညီရန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်းသည်ရှေ့သို့မသွားမီတွင်အကောင်းဆုံးအကြံဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဒဏ်ငွေ၊ လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်အခြားပြစ်ဒဏ်များအကြားပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတို့ခံရနိုင်သည်။
ဆေးခြောက်စီးပွားရေးကိုစတင်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ခက်ခဲသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငွေသားစီးဆင်းမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဖောက်သည်များနှင့်ကြီးထွားခြင်းစသည့်ပုံမှန်အတားအဆီးများအပြင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရမည် - သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရမည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ရှေ့နေသင့်ဘက်၌ရှိနေခြင်းအားဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးချဲ့မှုကိုသေချာစေရန်မှန်ကန်သောအခြေခံအုတ်မြစ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောဆေးခြောက်ရှေ့နေသည်သင့်အားဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ဇုန်ခွဲခြားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ဒေသန္တရနှင့်ပြည်နယ်လိုင်စင်များကိုလိုက်နာခြင်းတို့အတွက်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
ရှေ့နေမပါလျှင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးကိုအုပ်ချုပ်သည့်ဥပဒေများ၏အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောကြောင့်၎င်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲပါးနပ်စွာလမ်းလျှောက်သွားရန်လွယ်ကူသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်များစွာသည်သင့်အားဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့်ထောင်ကျခြင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်သိမ်းခြင်း၊
မှန်ကန်သောဆေးခြောက်ရှေ့နေသည်သင့်အားဤစွဲချက်များကိုခုခံကာကွယ်ရုံသာမကသင်၏စီးပွားရေးဂုဏ်သိက္ခာကိုပါကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်အကျိုးတူလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေ၏အကန့်အသတ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဥပဒေရေးရာပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖိစီးမှုမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်ထိုက်တန်သည်။
5. ဆေးခြောက်သို့မဟုတ် Hemp စီးပွားရေးအန္တရာယ်ကိုကန့်သတ်ခြင်း
ဆေးခြောက်ရှေ့နေငှားရမ်းခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်တွင်ဆေးခြောက်သည်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရတရားမဝင်ပစ္စည်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပန်းဖြေရန်အတွက်တရားဝင်အသုံးပြုသောပြည်နယ်များအတွက်မူခြွင်းချက်မျှမပြုလုပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေများနှင့်အညီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျင့်သုံးသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အန္တရာယ်မရှိပါ။
ရလဒ်အနေနှင့်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားရာဇ ၀ တ်မှုတရားစွဲဆိုမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးမှုများအကန့်အသတ်ဖြစ်စေရန်သူတို့၏ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်အကြံပေးသည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခြင်းအတွက်အကာအကွယ်မပေးနိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
၎င်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူများအားစနစ်တကျရာဇ ၀ တ်မှုကွန်ယက်များမှဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမောင်းနှင်မှု၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများအားဆေးခြောက်များဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတရားမ ၀ င် ၀ ယ်ယူခြင်းကဲ့သို့သောအခြားပြစ်မှုများတွင်တရားစွဲဆိုခြင်းကိုအဓိကထားသည်။
ဆေးခြောက်ကျွမ်းကျင်သူဆေးခြောက်ရှေ့နေတစ် ဦး နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်အန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်အဓိကထားကြောင်းသင်စိတ်ချနိုင်သည်။
ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းတွင်အမှားတစ်ခုတည်းကသင့်အားဖက်ဒရယ်တရားရုံးသို့ရောက်ရှိစေပြီးသင်၏ဘဏ္ancesာရေးကိုရှင်းပစ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှားများအနက်တစ်ခုမှာ ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၀ န်ထမ်းသစ်များငှားရမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားပါကဆေးခြောက်ရှေ့နေသည်သင့်အားတာ ၀ န်ယူမှုဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ အာမခံများဖြင့်ကူညီလိမ့်မည်။
ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သိသိသာသာအန္တရာယ်များရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဆေးခြောက်ရှေ့နေငှားရန်စဉ်းစားခြင်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။
ဆေးခြောက်ရှေ့နေတစ် ဦး သည်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘဏ္theာရေးအန္တရာယ်ကိုဖြေရှင်းပေးရန်သာမကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုများကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်ကူညီပေးသည်။
startup ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ စည်းမျဉ်းများရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရနိုင်ခြင်းကြောင့်ရှေ့နေတစ် ဦး သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်တူသည်။ ဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုသင့်ဘာသာပြန်ဆိုရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အချိန်ကုန်ပြီးရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။